कुुटुुनी बूढीको कथा ~ जोगी जिन्दगी
कुुटुुनी बूढीको कथा
1:17 PM अन्नपूर्ण पोष्ट, कथा, साहित्य 1 comment
त्यो दिन तिमी र म कुुनै अनकन्टार ठाउँमा बनाइएको एउटा प्राचीन कुुटीमा थियौं। यस्तो एकान्त ठाउँ लामो पदयात्रामा हुुँदा कहिलेकाहीँ मात्रै देखिन्छ। त्यस्तो बिरलाकोटी स्थानमा अवस्थित पुुरानो कुुटी नै हाम्रो स्थायी घर थियो। हामीसँग कुुटीमा बस्ने अरू कोही थिएनन्। हाम्रा गाउँले पनि थिएनन्।
अहिले झ्वाट्टै सम्झन सकिनँ, त्यो कुुटी कुुन्नि केले बनेको थियो ? मैले त्यस्तो तिक्खर तरिकाले त्यसलाई अवलोकन गरिनँ कि भन्ने लाग्छ। मलाई साँच्चै स्मृति छैन, त्यो कुुटी काठले बनेको थियो कि ढुुंगामाटोले ? मलाई यत्ति कुुराको भने राम्रै हेक्का छ। त्यसको ढोका मजबुुत थिएन। सायद त्यसमा कुुनै गजबार वा चुुकुुलसमेत थिएन।
झ्याल थियो, जसका खापा काठका थिए तर पलेटामा सिसा मात्रै भरिएका थिए। सुुरक्षाको लागि चौकोसमा ग्रिल वा फलामको रड हालिएको थिएन। कोही बदमास आएर सिसा फोरेर सजिलै भित्र पस्न सक्थ्यो। तर, त्यस्तो घटना भएको कुुनै सम्झनामा हामीलाई थिएन। एक दिन यस्तो अवश्य हुुनेछ भन्ने डर भने निकै थियो।
हाम्रो कुुटीका बारेमा मैले सम्झेको यत्ति हो।
‘कुुटी’को प्रसंग आउँदा तिमीलाई केटाकेटीमा खेलेको ‘कुुटिनी बूढी ढोका खोल, तेरो पाहुुना आयो’ भन्ने खेलको सम्झना आउन सक्छ। त्यस्तो खेल नखेलेको भएचाहिँ हामी कतै ‘कुुटी’मा बस्ने कुुनै ऋषि, तपस्वी वा सन्न्यासी त थिएनौं भन्ने शंका लाग्न सक्छ। तर, हामी त्यस्तो थिएनौं। तिमी र म पूर्णतया सांसारिक थियौं। हाम्रो कुुटीबास कुुनै हालतमा आध्यात्मिक थिएन। प्रयोगात्मक पनि थिएन। आममान्छेको घरजमजस्तै त्यो हाम्रो नियमित बसोबास थियो।
मलाई एउटा कुुराको स्पष्ट सम्झना छैन, त्यति बेला तिमी र म लोग्नेस्वास्नी थियौं कि थिएनौं ? सायद थिएनौं। न थि– पो –यौं कि ! अब आएर यस्तो शंकाको झमेलामा नपर्दा हामी दुुवैलाई ठीक होला। हामी सहवरणमा थियौं या थिएनौं प्रस्ट नभए पनि सहबासमा भने अवश्य थियौं। यो कुुरामा यकिन हुुन सक्नाको कारण के हो भने त्यति बेला तिमी र म भर्खरै सहबासबाट उठेका थियौं।
सहबासपछि तिमी सिनेमा हेर्न थालेकी थियौ। यो तिम्रो अनौठो स्वभाव थियो, सहबासलगत्तै सिनेमा हेर्ने। तिम्रो सिनेमाप्रेम लोभलाग्दो थियो। खासमा म तिमीप्रति लोभिएकै तिम्रो सिनेमाप्रेम देखेर हो। तिमीजस्तो नामुुद सिनेमावाज सुुन्दरीसँग सहबासमा रहे आनन्द हुुँदो हो भनेर म कामना गरिरहन्थेँ।
अचाक्लीसँग सिनेमा हेर्दाहेर्दा तिमीभित्र एउटा अनौठो खुुबी विकसित भएको थियो— तिमी अति नै चाँडो सिनेमा हेर्न सक्थ्यौ। लगभग तीन घण्टाको सिनेमा तिमीले एक घण्टामा हेरिभ्याउँथ्यौ। सिनेमा मात्रै होइन, तिमीले त नाटक पनि उत्तिकै रफ्तारमा हेर्न सक्थ्यौ। पोहोर हो कि कहिले हो, काठमान्डुुको एउटा नाटकघरबाट तिमी १५ मिनेटमा बाहिर निस्केकी थियौ। जब कि आमदर्शक एक घण्टापछि मात्रै बाहिरिएका थिए। सिनेमा र नाटक हेर्ने तिम्रो स्पिड लोभलाग्दो थियो। तर किताब भने तिमी असाध्यै ढिलो पढ्थ्यौ। मेरो किताब पढ्ने रफ्तार देखेरै तिमी मसित झ्याम्मिएकी थियौ जस्तो लाग्छ।
त्यस दिन तिमीले हेरिरहेको सिनेमा कुुनचाहिँ थियो कुुन्नि ? याद गरेको भए अहिले बताउन मजा हुुन्थ्यो होला। सिनेमा र किताबका नाम म प्रायः याद गरिहाल्छुु। त्यस दिन किन गरेनछुु ? हुुन त तिमीले हेरिसकेको सिनेमा हो, तिमीलाई त्यसको नाम किन चाहियो र, हैन?
सहबासपछि मलाई कफीको तलतल लाग्छ। म किचनमा कफी बनाउन गएँ, सानो इलेक्ट्रिक मगमा। तिम्रो कफी टेबलमा राखेँ। कफी भन्ने कुुरा तिमी सधैं नीलो मगमा खान्थ्यौ। मलाई भने सधैं हरियो मगमा मन पथ्र्यो। कफीको अन्तिम सुुर्कोलाई सुुरुप्प पारेपछि मेरो आँखा ढोकाको देब्रे कुुनामा गयो, गग्रेटोमा।
‘अहो, आजलाई पानी नै छैन !’, मलाई याद भयो। देब्रे हातमा पित्तलको गाग्री समात्दै मैले भनेँ, ‘पानी सकिएछ लिएर आउँछुु।’
तिमीले मतिर हेर्दा पनि नहेरी मुुन्टो हल्लाउँदै भन्यौ, ‘चाँडै आऊ है। मलाई डर लाग्छ।’ पानी भर्न कुुटीदेखि निकै तल जानुुपथ्र्यो, खोलामा। घना जंगलको बाटो। कुुटीबाट निस्किँदै गर्दा मलाई लाग्यो, आज तिमीलाई थोरै सताउनुु पर्छ। तिम्रो गाग्रीको घाँटीसम्म डर भरिदिनुुपर्छ।
जंगलको बाटोमा झाडी पन्छाउँदै म खोलातिर गएँ। खोला संग्लो थियो। पानी कञ्चन थियो। गाग्री भरेँ तर तुुरुन्तै कुुटीमा फर्किइनँ। मोबाइल झिकेर हेर्न खोजेँ। कुुटीमै छुुटेको रहेछ। सोचेँ, ठीकै भयो। लुुगा खोलेँ र खोलामा हामफालेँ। पौडेर पारि पुुगेँ। त्यस बेला सायद साँझको ४ बजेको थियो होला।
पारि पुुगेर एकछिन टहलिएँ। तराईको पनि होइन, पहाडको पनि होइन कस्तो कस्तो ठाउँ थियो त्यो। जमिन यस्तो थियो कि त्यहाँ कुुनै उकालो पनि थिएन, समथर पनि थिएन। वा हुुन सक्छ त्यो जमिन उकालो ओरालो अथवा समथर कस्तो छ भन्नेतिर ध्यान नै दिइनँ मैले। ध्यान गरे न थाहा हुुने रहेछ सत्य कुुरा।
म खोलावारि थिएँ। तिमी खोलापारि थियौ। त्यो कुुरा मलाई मात्रै थाहा थियो, तिमीलाई थिएन। म एक वस्त्र अर्थात् नितान्त निजी पोसाकमा थिएँ। होइन होइन, म कुुनै पोसाकमा होइन, सर्वांग नांगै थिएँ।
सहबासपछि तिमी सिनेमा हेर्न थालेकी थियौ। यो तिम्रो अनौठो स्वभाव थियो, सहबासलगत्तै सिनेमा हेर्ने। तिम्रो सिनेमाप्रेम लोभलाग्दो थियो। खासमा म तिमीप्रति लोभिएकै तिम्रो सिनेमाप्रेम देखेर हो। तिमीजस्तो नामुुद सिनेमावाज सुुन्दरीसँग सहबासमा रहे आनन्द हुुँदो हो भनेर म कामना गरिरहन्थे‌‌।
खोलाको पारिपट्टि घाँसे मैदान थियो। मैदानको किनारामा बुुट्याने जंगल देखिन्थ्यो, वा हुुन सक्छ त्यो जंगलको चित्र मेरो कल्पना मात्रै थियो। एक घण्टाजति चिच्याएर गीत गाएँ। खोलाको किनारैकिनार बालुुलामा खुुट्टा लतार्दै दौडेँ। जंगली फूल टिपेँ। गुुच्छा बनाएँ। फूलगुुच्छा देखेपछि बल्ल मलाई तिम्रो हेक्का भयो। अब त फर्कन्छुु भन्ने सोचेर खोलातिर गएँ।
तर खोला अघिको जस्तो थिएन। निकै ठूलो थियो, धमिलो थियो। कति चाँडै बाढी आएको रहेछ। सायद खोलाको मुुहानतिर ठूलो वर्षा भएथ्यो होला। खोलो यति उर्लेर आएको थियो कि पौडेर तर्ने आँटै आएन। मरियो भने त मरिगयो नि !
मेरा सबै कपडा पारिपट्टि थिए। के गरूँगरूँ भयो। उता कुुटीमा तिमी एक्लै थियौ। बेकारमा पौडिने बुुद्धि पलाएछ भनेर थकथकी भयो। ज्यानकै बाजी थापेर उर्लेको खोलामा हामफाल्ने कुुरा पनि भएन। म खोलाको किनारैकिनार माथितिर दगुुरेँ। सोचेँ, ‘माथितिर एउटा न एउटा पुुल त पक्कै भेटिन्छ होला नि !’
म दौडिरहेँ–दौडिरहेँ तर अहँ, पुुल आएन। बरु पुुलभन्दा पहिला एउटा हलुुका बजार आयो। तिमीलाई भनिसकेँ नि, म पुुरापूर नांगै थिएँ। तर खै किन हो बजारको सम्मुुखमा आइपुुग्दा पनि मलाई नांगो छुु भन्ने हेक्कै भएन। हेक्का हराएको हुुनाले मभित्र लाज–घिनको चेतनै थिएन। वा हुुनसक्छ म खोलाखोलै दौडेर त्यहाँ पुुग्दासम्म म कपडा लगाएको भइसकेको थिएँ। तर त्यस्तो पनि नहोला। मेरो मनमा कपडा लगाएको वा नलगाएको अनुुभूतिको कुुनै सारसंकेत थिएन।
त्यो सानो बजार थियो। तीनचारवटा मात्रै पसल थिए। सबै पसलमा जोडेर मुुस्किलले तीनचारजना मान्छे देखिएका थिए। बजारको पुुछारको चिया पसलमा अचानक तिम्रा बालाई देखेँ। मैले तिम्रो बालाई पहिलोचोटि त्यहीँ देखेँ। मलाई थाहै थिएन, तिम्रा बा उमेरमा तिमीभन्दा धेरै नै कान्छा रहेछन्। कस्ता कलिला बा ! मात्र उन्नाइस बीस वर्षका !
तिम्रा बा चिया खाँदै थिए। उनीसँग अरू मान्छे पनि थिए। उनीहरू मलाई अर्थात् हामीलाई नै खोजिरहेका थिए। मलाई भर्खरै मात्र याद भयो कि हामीहरू केही समयपहिले घरबाट भागेर आएका थियौं। तर, त्यो समय कति दिन, हप्ता, महिना वा वर्षपहिले थियो थाहा भएन।
सकेसम्म तिम्रा बाको पक्राउमा पर्ने कुुरा थिएन। उनले मलाई नदेख्दै म फरक्क फर्किएँ, जुुन बाटो आएथेँ त्यही बाटो हान्निँदै कुुदेँ। खोलाको किनारैकिनार लड्दैपड्दै अघि पौडी खेलेकै ठाउँमा आइपुुगेँ। त्यहाँ आइपुुग्दा मध्यरात भइसकेको थियो। जून टाउकोमाथि थियो। जुुनेली उज्यालो छरपस्ट थियो। त्यही उज्यालोमा मैले अघि बनाएको फूलगुुच्छा देखेँ। फूलगुुच्छा देखेपछि मलाई तिम्रो सुुमधुुर सम्झना आयो। सुुमधुुर सम्झनाले उल्टै थुुरथुुर डर लागेर आयो।
‘अब यसले मलाई गाली गर्ने होला। विचरा डराएर बसेकी होला। उता ढोकाको छेस्किनी पनि बिग्रेको थियो। जंगलको नजिक त्यसरी एक्लै छाडेर हिँड्नुु हुुन्थेन मैले। जंगली जनावर जताततै छन्’, खोलाको किनारमा उँधोमुुन्टो लगाएर यस्तै सन्ताप गर्न के थालेको थिएँ, खोलाको पानी झ्याप्पसँग सुुक्यो। चिरिप्पै भयो। छिनभरमै खोलो सुुक्खाटाट भयो। कस्सो मैले गाग्रीचाहिँ अघि नै भरिसकेको थिएँ !
खोलो अचानकसँग सुुकिदिएको हुुनाले जलचरलाई फसाद पर्‍यो। माछाहरू फ्याक-फ्याक उफ्रन थाले। गँगटाहरू बालुुवामा गुुटमुुटिन थाले। झिँगेहरू क्यारम्–क्यारम् भए। बामहरू बाउँठिएर बटारिन थाले। तर मलाई माछा, गँगटा, झिँगे वा बामहरूमा कुुनै दिलचस्पी भएन। दिलचस्पी लिएको भए त्यो दिनको मात्रै होइन, बाँकी धेरै दिनको तरकारीको जोहो हुुन्थ्यो। कुुटीमा फ्रिज छँदै थियो। तर, मलाई चाँडै घर पुुग्नुु थियो। तिमी जंगलको बिचोबीच एक्लै जो बसिरहेकी थियौ।
सुुक्खा खोलाको पारि पुुग्नेबित्तिकै मैले झटपट कपडा लगाएँ। गाग्री बोकेँ र हस्याङफस्याङ गर्दै कुुटीमा फर्कें। तिमी अझै पनि सिनेमा हेर्दै थियौ। मलाई ढोकामा आइपुुगेको चाल पाएर तिमीले भन्यौ, ‘हैन कति चाँडै आएको यो मान्छे ? उडेरै जान्छौ कि के हो ? ’
‘हैन के भन्छ्यौ तिमी ? बाहिर हेर त। सिनेमा हेर्दाहेर्दा रात परेको पनि थाहा नपाउने हुुस्सुु !’ मैले झ्यालतिर देखाएँ। उच्चाटलाग्दो कुुरा के भने बाहिर पूरै टन्टलापुुर थियो। अब टन्टलापुुर अँध्यारो त हुुने कुुरा हुुँदैन, त्यो हुुने त घाम नै हो। सोचेँ, ‘मुुला सपना त हो, घाम लाग्नलाई कुुनै कारण किन चाहियो ? सपनाको घाम जतिखेर लागे पनि भयो, जतिखेर अस्ताए पनि भयो।’
‘पागल ! तिमी अब बहुुलाउन बेर छैन।’ रिमोटको कुुनै बटन थिच्दै तिमीले भन्यौ। टीभीको स्क्रिनमा अघिसम्म छङछङ बगिरहेको सिनेमा एउटा दृश्यमा अड्किएर टक्क रोकियो। मलाई सिनेमा र अघिको खोलो उस्तै लागेर आयो। तर, टीभीको स्क्रिनमा माछा, गँगटा वा झिँगेहरू फœयाक फœयाक उफ्रिरहेका थिएनन्। त्यहाँ त एउटा सानो कुुटी थियो, रातो माटोले लिपिएको। कुुटीको पिँढीमा पित्तलको हत्यौरी थियो।
सायद मलाई मात्रै थाहा थियो, हामी सपनाको कुुनै घटनामा छौं भन्ने कुुरा। तिमीलाई थिएन। मैले ‘यो सपना हो प्रिय। यहाँ घाम–जूनको ठेगान हुुँदैन। यहाँ सिनेमा र खोलामा अन्तर हुुँदैन।’ भनेर भनिदिएको भए पनि हुुन्थ्यो। तिमी विचरी जे देख्यौ, जे सुुन्यौ, त्यसैलाई यथार्थ ठानिबस्यौ र मैले ल्याएको पित्तलको गाग्री बोकेर खित्खिताउँदै भान्छातिर लाग्यौ। त्यसो त साँझको खाना बनाउन ठिक्क परेको मान्छेलाई यो यथार्थ होइन, सपना हो भनेर रनभुुल्लमा पार्ने कुुरा थिएन मैले।
भान्छातिर जाँदाजाँदै उर्दी गर्‍यौ, ‘बाँकी फिल्म हेर्देऊ है। आजको खाना म बनाउँछुु।’
तिमीले यस्तरी भन्यौ मानौं सिनेमा हेर्नुु पनि एउटा काम हो, बच्चाबच्ची हेर्नुुजस्तै, खेतीबारीको हेरालो गर्नुुजस्तै, घरकुुरुवा बस्नुुजस्तै। यस्तो काम जसलाई परिवारका सदस्यले पालैपालो गर्नुुपर्छ। दायित्वको काम। कर्तव्यको काम। हात बाँड्ने काम। म सिरक ओढेर सोफामा बसेँ। रिमोटको ‘प्ले’ गेडी थिचेँ। टीभी स्क्रिनमा त्यही सिनेमा चल्न थाल्यो, जसको कथा मैले तिमीलाई भर्खरै सुुनाएर भ्याएको छुु।
Published on : Annapurna Post
Unknown March 15, 2022 at 6:34 AM
भरखर एउटा कथा र सिनेमा सकियो।